Agromart – Agricultural Marketplace Nepal
ओखर एकदमै ठुलो हुने रुख हो । यस रुख धेरै बलियो हुन्छ , यस रुखको आयु सरदर २०० बर्ष हुन्छ ।ओखरको एक बयस्क रुखले १०० देखी २०० केजी सम्म फल दिन्छ । यो दुई प्रजातिको हुन्छ , प्राय: नेपालमा हाडे ओखर बनजङ्गलमा पाईन्छ । ओखरको दाते प्रजातिको ओखर चाही राम्रो हुन्छ , यसको बाहिरी भाग नरम हुने हुँदा दातले नै फुटाएर खान सकिन्छ । खेती प्रबिधी : नेपाल मा ओखरको खेती समुन्द्री सतहबाट ९०० मिटर देखी ३५०० मिटर सम्म गर्न सकिन्छ । ओखरको रुख ठुलो हुने हुँदा यसलाई 7-7 मिटरको फरकमा लगाउनु पर्छ । यो बिरुवा १ रोपनिमा १० – १५ ओटा लगाउन सकिन्छ । यस बिरुवाले ५-६ बर्ष बाट उत्पादन दिन सुरु गर्दछ । लगाउने विधि : -२ फीट को खाडल खनेर मल र माटोको मिश्रण राख्ने ।त्यसपछि नया पालुवा आउन अधिको विरुवालाइ रोप्ने । -हिउदको समयमा पानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हिउदमा पनि राम्रो संग यसलाइ लगाउन सकिन्छ । -स्याहार सुसार राम्रो संग गरेर एक पटक हुर्काएको विरुवालाई हुर्किसकेपछि त्यति धेरै हेरचाह गर्नु नपर्ने । ओखरका फाईदाहरु : -क्यान्सर रोगा सँग लड्ने क्षमताको बिकास हुन्छ । -मुटु स्व स्था राख्दछ । -शरिर मजबुत बनाउनमा मद्दत पुर्याउछ । -तौल घटाउन मद्दत गर्छ । -मस्तिस्कलाई तेजिलो बनाउन सहयोग पुर्याउछ । बजार : बिश्व बजारमा ओखरको माग अत्याधिक छ । नेपाली बजारमा ओखर प्रती किलो ६००-७०० सम्ममा बिक्री हुन्छ । ओखर चाडै नबिग्रने हुँदा यसलाई लामो समयसम्म पनि भन्डारण गरेर राख्न सकिन्छ । यो बिरुवा धेरै बर्षसम्म बाचिरहने हुँदा पछील्लो पुस्ता सम्मको लागी पनि आम्दानिको राम्रो स्रोत बन्छ । ओखर बिरुवाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् : याग्रो मार्ट प्रा. लि. (Agromart Pvt.Ltd.) काठमाडौं : चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज 01-4418921,9866072127(Viber/WhatsApp/Imo),9808511981
Loquat Fruit Plant
जापनिज हलुवाबेद (Japnease Persimmon)
ल्वाङ खेती गर्ने तरिका : ल्वाङ एउटा सदाबहार बासनदार वृक्ष हो । ल्वाङ हामीले दिनहुँ प्रयोग गर्ने मसला हो । ल्वाङको मसला बाहेक आयुर्वेदिक अाैषधिमा प्रयोग गरिन्छ । ल्वाङको रुख प्राय: ८ मिटर देखी १२ मिटर अग्लो हुन्छ । यो बिस्तारै बढ्ने रुख हो । यसको आयु अाैसतमा १०० बर्ष भन्दा बढी हुन्छ । खेती प्रविधि: – ल्वाङ खेती समुन्द्र सतहबाट ६०० मिटरदेखी १८०० मिटर सम्ममा गर्न सकिन्छ । दोमट, रातो, कालो र मलिलो माटो राम्रो हुन्छ । तर बलौटे माटो यसको लागी त्यती राम्रो हुँदैन । – विरुवा रोप्दा ५-६ मिटरको फरकमा रोप्नुपर्दछ । – विरुवा रोपेको ४-५ बर्षमा ल्वाङ फल्न शुरु गर्दछ । १० बर्ष पुगेको ल्वाङको विरुवाले १५-२० केजी ल्वाङ उत्पादन गर्दछ । बजार : नेपाली बजारमा ल्वाङ होलसेलमा १००० देखी १२०० प्रती केजिमा बिक्री गर्न सकिन्छ बिरुवाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् : याग्रो मार्ट प्रा. लि. (Agromart Pvt.Ltd.) काठमाडौं : चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज 01-4418921,9866072127(Viber/WhatsApp/Imo),9808511981 याग्रो मार्ट प्रा. लि.,पोखरा बसन्त नर्सरी प्रा लि (सहकार्यमा ) न्यू रोड , पोखरा फोन : 61-538626,9856026942,9802826942
Dealer Agent Form Agromart , Please fill up this form Loading…...
मोरिंगा के हो ? मानव शरिरलाई आवश्यक पर्ने ९० भन्दा बढि किसिमको पोषण तत्व र ४६ किसीमका एन्टी अक्स
के हो त ड्रागन फल ? यसबाट कती कमाउन सकिन्छ ? हेर्नुहोस ।
के हो त ड्रागन फल ? यसबाट कती कमाउन सकिन्छ ? हेर्नुहोस । यो ड्रागन अर्थात सिउँडी प्रजातीको फल हो ।
जैतुन (Olive) खेतिको बारेमा हेर्नुहोस जसको तेल विश्व बजारमा एकदमै महगोँ पर्छ ।